19 Responses to “ရွာသီတင်းကျွတ်”
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ သီတင်းကျွတ်အခါသမယလေးပေါ့။ ဒါနဲ့ မုဆိုးမလ္ဘက်ရွက်က ဘယ်လိုပုံစံလေးလဲ မသိဘူးနော်။ မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့လေးနဲ့ မသိသေးတဲ့ ထုံးစံလေးတွေကို ခွင့်ရလိုက်တာ ကျေနပ်စရာပါ။
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို မြန်မာပြည်အနှံ့နွှဲပျော်ကြတာ တကယ့်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်စရာ ဓလေ့လေးပါ။ ချောလည်း သီတင်းကျွတ်ရက်မြတ်အခါသမယမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..။ သီတင်းကျွတ်မှာ စာတွေပဲရေး၊ အလုပ်တွေပဲ ရှုပ်မနေပဲ သီတင်းကျွတ်ချိန်မှာ ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်ပါစေလို့.. :)
(ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သိမယ်ထင်ပါရဲ့ ချောရေ..)
ပွဲတော်ရက်တွေဆို စည်ကားနေတဲ့ ဇာတိမြေကိုတောင် လွမ်းသွားတယ်မမရေ...ပျော်စ၇ာကြီးနော်...မမ:)
ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး မချောတို့ ဓလေ့ကိုလည်း လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ် မချောရေ့...။
(အစ်မမြသွေးနီ... ပြောသွားတာကြားတယ်နော်... မချော...း))
မီးထွန်းပွဲတော် ဓာတ်ပုံလေးတွေက တော်တော်လှပါရဲ့...
မတွေ့ ရတာ ကြာလို့အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတယ် ထင်ပ...
ဒီကနေ့ မွေးနေ့ ရက်မြတ်ကစပြီး
ပြည့်စုံပါစေ တို့ အစ်မချောရေ...
မချောရဲ့ အသေးစိတ် သရုပ်ဖော် အရေးအသားမှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေက ထပ်ပြီး အားဖြည့်ထားလို့ ကျေးလက်ဒေသက သတင်းကျွတ်မြင်ကွင်းလေးကို အပြည့်အဝ ခံစားရပါတယ်၊ ပျော်စရာလည်းကောင်း၊ လွမ်းစရာလည်း ကောင်းတဲ့ ရပ်ဓလေ့၊ ရွာဓလေ့ကို တမ်းတမိတယ်၊ အထူးသဖြင့် မမြင်ရတာ ကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျေးလက်အလှူ ဓါတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ မချောရေ...။
မမြင်ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေ မြင်ရတော့ ကျေနပ်သလိုလို။ နောက် ဘာရယ်မသိ ဟာတာတာနဲ့ ကျန်ခဲ့သလိုလို။ ဒါ.. ၂၀၁၂ သီတင်းကျွတ် feeling လားမသိ မချောရေ...။
တောရွာ ဓလေ့ အရိုးသား ဆုံး နဲ့ ပကာသဏ မပါ ၊ စေသနာ အပြည့် နဲ့ လှူ တဲ့ အလှု ကို ဖတ် လို့ ကောင်း အောင် စီစဉ် ရေး သား ထား တော့ ကျွန်တော် တကယ် ပဲ အဲဒီ ရွာ အလှူ ရောက် သွား သလို ခံ စား မိတယ်။
လဘက် နဲ့ ဘာလကြောင် ကြော် ၊ တော လက်ရာချက် ဟင်း တွေ စား ချင် တယ်။ ဟန်မဆောင် နိုင် တော့ပါ။
ဝိုးးးးးးးးးးးးးးး မချောတို့ ရွာသီတင်းကျွတ်က ပျော်စရာကြီး.. ဇာတ်ိမြေကိုတောင် လွမ်းသွားပြီ... :)
So nice,sis ! I miss my home town too.
ကချင်ဒေသနဲ့ ရွှေကျင်ဒေသဟာ ကွာခြားမှုများသော်လည်း မီးထွန်းပွဲဓလေ့မှာ ဆင်ဆင်တူနေတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ အလှူရဲ့ စားသောက်ဖွယ်တွေကတော့ ဒေသအာဟာရပီပြင်ပါပေ့ ...
ရွာအလှူက ဟင်းတွေ ကြည့်ပြီး အရမ်းစားချင်နေတယ်
ရွာတွေအတော်များများမှာ အဲဒီလို အလှူတွေ ရှိကြတယ်နော်၊
ငယ်ငယ်တုန်းကလိုတော့ ကြုံဖို့ဆိုတာ တကူးတက သွားမှ ရတော့မှာ လို့ တွေးနေမိတယ်။